निर्मला ह’त्या प्रकरणमा पूर्वसभासदको नाम पनि मुछियो, पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी, को हुन् उनी ? — Sanchar Kendra
निर्मला ह’त्या प्रकरणमा पूर्वसभासदको नाम पनि मुछियो, पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । बाँकेको निर्मला कुर्मी ह’त्या प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सह–सचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिले पूर्वसभासद् बादशाह कुर्मीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
अधिवक्ता समेत रहेकी मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी भने हाजिरी जमानीमा छाडेपनि फेरि हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नसक्ने बाटो रहेको बताउँछिन् । जिल्ला प्रशासनबाट कागजात लिएपछि निर्मला बेपत्ता भइन् । त्यसपछि नै जग्गा हडप्ने काम सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा काम गरिसकेका एक अधिकारी बताउँछन् ।
छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार, निर्मला कुर्मीको परिवार हालको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ मा पर्ने साबिक परस्पुर गाविस–९ मा बसेको थियो । मधुमेहबाट ग्रसित निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मी २०६२ सालमा परलोक भए । त्यसपछि उनको ४ बिघा १० कट्ठा जग्गामा भू–माफियाको नजर पर्यो ।
पूर्वसभासद् कुर्मीसहितका व्यक्तिले निर्मलाको कुनै कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने धम्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानवअधिकारकर्मी रुबी खान पूर्वसभासद् बादशाह कुर्मीले निर्मलालाई पटकपटक धम्की दिएको बताउँछिन् ।
‘जब उहाँको श्रीमान वित्नु भयो, त्यतिवेलैदेखि सम्पत्ति हडप्न ज्यान मा’र्ने धम्की दिइरहनुभएको थियो’ खानले भनिन्, ‘घरबाट ननिस्किन, बाहिरका मान्छेलाई पनि आउन नदिन दबाब दिइरहनु भएको थियो, निर्मलालाई घरमै बन्दी सरह बनाउनुभएको थियो ।’
छानविन समितिको प्रतिवेदनमा कुर्मीको ज्यान नै खतरामा पर्ने स्थिति आएपछि उद्दार गरेर ‘सेफ सेल्टर’मा राखिएको उल्लेख छ । बाँकेका एमाले नेता आईपी खरेल मानवअधिकारकर्मी, स्थानीय र बुद्धिजीविहरुको तीव्र दबाबपछि बादशाहले निर्मलाको जग्गाको लालपूर्जा, नागरिकता आदि बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको बताउँछन् ।
त्यहीबेला स्थानीय निजामुद्दिन दर्जीले निर्मलाले आफूबाट ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको कागज निकालेको छानबिनमा खुलेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार, त्यही आधारमा उनले ८ भदौ २०६९ मा जिल्ला अदालत, बाँकेमा लेनदेनको मुद्दा दर्ता गराए ।
नेपालगञ्जको धम्बोझी बस्ने पार्वती विष्टले पनि निर्मलाले आफूबाट ऋण लिएको देखाउँदै त्यहीबेला मुद्दा दर्ता गरिन् । दुवै मुद्दामा अदालतले बिगो असुलीका लागि घर जग्गा लिलाम गर्ने आदेश सुनायो । त्यतिबेला उक्त घर जुबेदा इन्द्रिसको नाम हुँदै अरुलाई ब्रिक्री गरिएको समितिको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
त्यसपछि उक्त जग्गा रत्नाको नाममा गएको देखिन्छ । रमेश थापा र पार्वती विष्ट हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । पार्वती विष्ट रमेश थापाको फूपूको छोरी हुन् । अधिकारकर्मी खान पूर्वसभासद् बादशाह कुर्मीको योजनामा थापा, विष्टहरु खडा भएर जग्गा हडप्ने काम भएको बताउँछिन् ।
‘निर्मलालाई अ पहरण गरेर जानकी गाउँपालिकाको मानपुरमा रहेको रमेश थापाको प्लाइउड उद्योगमा बन्धक बनाएर राखिएको थियो’ खान भन्छिन्, ‘त्यसपछि तमसुक बनाएर मालपोतका हाकिमहरु समेतको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी भएको हो ।’ अनलाइन खबरबाट साभार